★မြန်မာ့အလင်း★: ကြိုဆိုပါတယ် ကိုဟာဂျီဝက်စီ
မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တွေဟာ သူတို့နဲ့ဘာသာအတွက်ဆိုရင် တရားမျှတသလား မစဉ်းစားပါဘူး။ ဥပမာ ပါလက်စတိုင်းနဲ့ အစ်စရေး ကိစ္စကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အစ်စရေးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်း ဘက်လိုက်တယ်ဆိုရင် လူမြင်လို့ မကောင်းလို့ လူအခွင့်အရေးတွေနဲ့ ဖုံးကွယ်ပြီး အစ်စရေးကို ဆန့်ကျင်နေတာပါ။ မွတ်ဆလင်အတွက်ဆိုရင် အော်လိုက်ဟစ်လိုက်နဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ ဖြစ်နေတာ မြင်လို့မကောင်းအောင်ပါပဲ။
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အတုကိစ္စမှာလဲ ကုလားတွေဟာ တိုင်းရင်းသားမိုလို့ လုပ်ပေးနေတယ်လို့ လူကြားကောင်းအောင် ပြောဆိုနေပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာနဲ့ မဆိုင်ပဲ။ တကယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသာ ခရစ်ယာန်နိုင်ငဖြစ်နေရင် ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေ အခုလိုတက်ကြွမယ်ထင်ပါသလား? အဲဒီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် အတုကိစ္စတင်မကပါဘူး တခြား မတရားတဲ့ ကိစ္စတွေအများကြီးလည်း လုပ်နေကြပါတယ်။
ဒါတွေရဲ့ အရင်းမြစ်ဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အတုပြဿနာ အခုတစ်ခါ ဆန့်ကျင်နိုင်လဲ နောင်မှာ ထပ်ဖြစ်ဦးမှာပဲ။ ထို့အတူ တခြားသော လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေလည်း ဆက်လုပ်ဦးမှာပါ။ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ကနေ ဖြိုဖို့ကလွဲလို့ ကျန်သော နည်းလမ်းများမှာ ရေရှည်တွင် အသုံးမ၀င်ပါ။ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒဆိုးကြီးကို ဖြိုပြစ်ဖို့ အဓိကသော့ချက်ကတော့ မွတ်ဆလင်ဝါဒအကြောင်း အမှန်ကို မီးမောင်းထိုးပြဖို့ပါ။ အဲလို မီးမောင်းထိုးပြဖို့အတွက် ဟာဂျီဝက်စီ ကနေ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး ( anti786.blogspot.com ) ဘလော့တည်ထောင်လိုက်ပါပြီ။ တောသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မောင်ဆန်နဲ့ ဇော်မျိုးတို့ကနေ ကိုဟာဂျီဝက်စီကိုအထူး ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျနော်တို့အနေနဲ့လည်း မ May Htaik ကို ဘလော့ထောင်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဘလော့ နှစ်ခုရှိနေလို့ သူက မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီး ပြောဆိုနေတယ်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာ ယုတ်ညံ့တွေက သိပ်များလွန်းတော့ ဘလော့နှစ်ခုနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ မ May Htaik အပါအ၀င် တခြားမြန်မာများလည်း ဘလော့ တည်ထောင်ပြီး မွတ်ဆလင်ဝါဒဆိုးကြီးအကြောင်းကို လူတွေသိအောင် လုပ်ဖို့ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ မတရားမှုကို ဒေါသထွက်ဖို့ထက် လက်တွေ့ကျကျလုပ်သင့်တာက မှန်ကန်တယ်ဆိုတာ လက်ခံပါသလား? ဒါဆိုရင် မိမိတို့သွားလည်တဲ့ ဘလော့တွေရဲ့ ဆီပုံးတွေမှာ ကိုဟာဂျီဝက်ဆီရဲ့ ( anti786.blogspot.com ) ဘလော့ကို အလည်အပတ်ခေါ်တဲ့ စာလေးတွေ ရိုက်ထည့်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ထို့အတူပဲမိမိတို့ မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ကိုဟာဂျီဝက်စီရဲ့ ဘလော့Link ( anti786.blogspot.com ) လေးကို လိုက်လံဖြန့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နိုက်ယာဂရာ မောင်ဆန်နှင့် ဘရမ်တန် ဇော်မျိုး
aww i see , it is your brother in law ha ji watt se , let him to fuck to your sis . har har har
Be ka ma ay lo klar.,le?
generalthanshwe420.. so tar..min to kalar twe yote mar tar thi twar lo lar?.ngar le min ye sister kalar ma ko twe yin Ahar ya pa ya " LOO" pay mee.
kyar lar? ko may ko lo dog kalar.
kosoe ma aye loe yay...generathanshwe420 so dar minaphay lay.. min amay ko may kyi .. ka lar lee cho lar lo.. min ka akhu ma aww nay dae hot lar?..min sis ko ha ji wat se nae pay kone khine lit.. har har har har.... ka lar lee suck lo wa ma aww nay dae hot lar??... aww chin thay yin nga lee thite mar lar aww
minaphay( generalthanshwe420 )
ko may ko loo (ko soe )minamay nga loo lo nga ko ka lar lo pyaw dar lar??? min pyaw tha lo bae htar bar nga ka ka lar ok!!... min ka bar lae so dar thi lar?????min mother ko may kyi bae thu nae min ko ya dar lae lo ok!!!min dot lo dog pyit tat stick ka myar....